General - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Ny piramidan'i Ejipta dia iray amin'ireo mistery lehibe eran'izao tontolo izao. Izy ireo dia zavatra tsy mampino, indrindra rehefa mihaino ireo teoria izay notenona sy mitohy Ny piramidan'i Ejipta dia mahagaga sy mistery amin'ny fotoana iray ihany. Mino izay lazain'ny arkeology momba ny fanamboarana azy ve ianao sa heverinao fa misy saka mihidy?
Ny tilikambo avo indrindra eran-tany dia hita indrindra any Azia. Ny voalohany avy any Andrefana no eo amin’ny laharana fahavalo. Sahia mahita azy ireo.
Bunkers any Espaina
Betsaka ny bunker any Espaina manomboka any Bilbao ka hatrany Catalonia, mandalo an'i Madrid. Tsy heverinao ve fa endrika fizahan-tany hafa ny fitsidihana azy ireny?
Ahoana no namoronana ny Nosy Canary?
Ny Nosy Canary dia vondronosy iray any amin'ny Oseana Atlantika. Any avaratrandrefan'i Afrika izy ireo ary amin'ny fitambarany dia mahatratra nosy valo, nosy dimy ary nosy valo.Ny Nosy Canary dia nosy misy volkano mavitrika sy zavaboary manafotra. Fantaro izay fantatra momba ny fiforonany amin'ny alalan'ny fotoana, ny magma ary ny fipoahana pyroplastic.
Sakafo mahazatra any Seville
Ny gastronomy espaniola dia tena matsiro sy isan-karazany, ka na aiza na aiza alehanao dia hihinana mahafinaritra ianao. Raha, ohatra, mandehandeha manodidina ny Raha mankany Seville ianao, dia aza adino ny manandrana ny sakafo mahazatra indrindra amin'ny sakafo matsiro sy isan-karazany: trondro, sifotra, legume, saosisy sy ny maro hafa.
Ny fromazy frantsay malaza indrindra
Frantsa dia mitovy amin'ny fromazy. Ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena dia manana ny fromazy na fromazy manokana, ary misy fromazy 240 eo ho eo izay hita amin'ny ankapobeny Jereo ny mahafinaritra sy matsiro isan-karazany ny fromazy frantsay malaza: Roquefort, Brie, Reblochon sy ny maro hafa...
Tantaran'ny Alhambra. Tadiavo ireo angano niaraka tamin'ny tsangambato mahafinaritra an'i Granada, nambara ho Lova Iraisam-pirenena.
Fomba amam-panao any amin'ny faritr'i Amazonia
Anisan’ny fomba amam-panao any amin’ny faritr’i Amazonia ny fivavahana sy ny fomba fiainan’ireo foko monina ao. Fantaro izy ireo.
Fomban-drazana tsy fahita firy eto amin'izao tontolo izao
Ary rehefa mieritreritra ianao fa izao tontolo izao dia toerana ara-dalàna kokoa noho ny tamin'ny fotoana hafa, dia tonga saina fa tsy izany, fa mbola misy fomban-drazana, fomba amam-panao, tena zavatra Mamaky lovia, manapaka rantsan-tànany, manipy voatabia, voasary na kanelina, karan-tsoavaly manafina. , zazakely mitsambikina... fantatrao ve ireo fomban-drazana hafahafa ireo?
Sakafo mahazatra any Espaina
Ny sakafo Espaniola mahazatra toy ny omelette ovy, paella na tsaramaso Asturian dia malaza manerana izao tontolo izao. Sahia mankafy azy ireo.
Naturism: inona izany
Nandeha an-tongotra niboridana daholo izahay rehetra na nanala ny akanjo fandroana tao anaty dobo, ary tsaroanay fa ny fahatsapana hafahafa sy mahafinaritra momba ny Naturism dia mihoatra lavitra noho ny mandeha miboridana eny amoron-dranomasina, fomba fiaina izay azon'ny rehetra arahina.
fomba amam-panao Swiss
Ny fomba amam-panao Soisa dia manomboka amin'ny fiainana ara-tsosialy ka hatramin'ny asa tanana amin'ny fety sy ny sakafo. Sahia mahita azy ireo
Sakafo alemana mahazatra
Firenena federaly manana tantara an-jatony maro i Alemaina, ka ny sakafony dia manambara fotsiny ity dia ara-kolontsaina ity. Tsy malaza tahaka ny frantsay, ny sakafo alemana dia mihoatra lavitra noho ny saosisy sy ny labiera, koa miomàna hanandrana tsiro bebe kokoa ary eny, be dia be koa.
fomba amam-panao anglisy
Hahagaga anao ny fomba amam-panao any Angletera toy ny Boxing Day na ny fiovan'ny mpiambina ao Buckingham. Sahia mandeha any ary mankafy azy ireo
Sakafo mahazatra any Japon
Tiako ny sakafo japoney, zavatra ankafiziko indrindra isaky ny mandeha aho ary, mandritra ny fotoana fohy, ao an-tanànako. Ary ny hazakazaka dia fantatrao ny sakafo mahazatra indrindra any Japon: sushi, ramen, soba, okonomiyaki, shabu-shabu, oinigiri ...
Sénégal dia firenena any Afrika Andrefana ary fantatra amin'ny anarana hoe "vavahady mankany amin'ny kaontinanta afrikanina". Firenena tsara tarehy izy io, misy karazan-javamaniry isan-karazany ary Fantaro ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana any Sénégal.
Iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra eran-tany i Gresy. Raha ny marina, io no fototry ny demokrasia tandrefana maoderina ary mbola hitanao ny fomban'i Gresy: inona no hohanina, manao ahoana ny fianakaviana, asa, zavakanto ...
Aiza no handehanana honeymoon
Ny volan-tantely dia tena zava-dehibe satria io no fotoana tena mampitony ny mpivady ary afaka mankafy fiadanana kely amin'ny farany. Amerika ve izany, Azia, Afrika sa Eoropa ... aiza no tianao haleha honeymoon?
Jereo ny fomba amam-panao any Italia, ireo izay namolavola ny toetran'ny mponina ao aminy rehefa mandeha ny fotoana.
I afovoany dia eo afovoan'i Eropa ary aorian'i Russia dia izy no firenena misy mponina betsaka indrindra ao amin'ny kaontinanta, misy olona 83 tapitrisa mipetraka. Jereo hoe inona ny kolontsaina alemanina, ny toetran'ny vahoaka, ny fomba amam-panaony, ny fomban-drazany
Firenena Silamo i Egypt, koa tsara ny mahafantatra zavatra vitsivitsy momba ny kolotsaina alohan'ny hitetezanao. Fomba fitafy, fomba fiarahabana, fomba fitondran-tena.
Roma dia iray amin'ireo tanàna tsy mampino indrindra any Eropa. Tiako ity tanàna ity, tsy afaka ho tsara tarehy kokoa izy io, koltoraly kokoa, mahaliana kokoa ... Tsy azo atao Alohan'ny handehanana any Roma, mianatra kely momba ny kolontsainy, ny tantarany, ny nahandroany, ireo fety sy fomban-drazany.
Ny akanjom-paritra galisiana
Ianaro ny tantaran'ny fitafiam-paritra galisiana, akanjo nentin-drazana an'ny tantsaha tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary mandraka androany aza.
Sakafo mahazatra an'ny Aguascalientes
Jereo ny sakafo mahazatra an'i Aguascalientes, famolavolana ny fomban-drazana mahandro sakafo any amin'ny faritra hafa any Mexico sy ny gastronomie zanatany.
Sina dia firenena mahafinaritra manana kolontsaina an'arivony, manankarena ary maro karazana. Izy io dia toy ny tontolo iray misaraka, miaraka amin'ny fiteniny, ireo fetiny, ny zodiakany manokana, ny kolontsaina sinoa dia manan-karena, maro karazana, mahaliana, mahafinaritra. Ny fomban-dry zareo, ny fety, ny sakafo, ny mozika ... na ny zodiac aza!
Akanjo mahazatra an'ny Faritra Andean
Novakiantsika ny "Andean Region" ary mieritreritra an'i Amerika atsimo sy firenena maromaro izahay, fa raha ny tena izy, manokana dia manondro ny iray amin'ireo faritra voajanahary enina io. Ny faritra Andean dia iray amin'ireo faritra manana fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny velaran-tany sy kolontsaina any Kolombia. . Jereo ny akanjo fanaony mahazatra!
Akanjo mahazatra avy any Oaxaca
Ny fitafiana mahazatra dia mandika ny fomba amam-panao, ny fomban-drazana, ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tany sy ny mponina ao aminy, ny kolontsainy, ny fivavahany, ny gastronomia ao aminy, ny Ny fitafiana mahazatra an'ny Oaxaca dia hira iray ho an'ny loko sy fifaliana. Aza mitsahatra ny mahafantatra azy ireo.
Akanjo mahazatra Chiapas
Mexico dia firenena manana kolontsaina marobe manana fomba amam-panao efa an-jato taonany. Iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra ao Chiapas, any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny firenena. Izy io dia manana ny antsasaky ny azy Raha misy akanjo miloko sy falifaly izay akanjo mahazatra an'i Chiapas, ny "chiapaneca". Fa tsy izy irery!
Akanjo mahazatra Nikaragoana
Ny akanjo mahazatra an'ny firenena tsirairay avy na ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena dia milaza amintsika momba ny faritany, ny fomba amam-panaony ary ny fomban-drazany. Ary rehefa miresaka momba ny akanjo fanaon'izy ireo mahazatra ny Nicaraguan dia ampifandraisina amin'ny dihin-drazana, koa miomàna amin'izay tontolo misy loko miloko sy falifaly.
Akanjo Venezoeliana mahazatra
Ny firenena tsirairay avy na ny faritra isam-pirenena dia manana akanjo mahazatra, akanjo nentim-paharazana izay mampifangaro ny tantaram-pirazanana ao aminy, izany hoe ny fanehoana ny kolontsaina.
Ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny fombany, vokatra avy amin'ny fandehan'ny fotoana, ny mponina ao aminy, ny taniny. Inona ary, ireo fomba amam-panao Espaniola mety? Fantatrao ve ny fombafomba Espaniola malaza indrindra? Flamenco, adin'omby, fety, fialantsasatra, manao ahoana ny fampakaram-bady, inona no hiditra amin'ny bar sy tapas ...
Ny hazakaza-tsoavaly Sanlúcar dia seho hafa izay mitranga amin'ny tontolo voajanahary mahafinaritra sy manana tombony
Fetibe fito aogositra any Espana izay tsy azonao adino
Manolotra fety fito aogositra any Espana izahay izay tsy azonao adino. Anisan'izany ny Fiavian'ny Sella, La Paloma na ny Malaga Fair
I Mexico no firenena manana fahasamihafana ara-kolontsaina lehibe indrindra any Amerika, noho izany manana ranomasina misy fomban-drazana mahaliana sy liana. Ny sasany efa antitra be, ny sasany Ny Andron'ny Maty, ny Virjin'i Guadalupe, ny Fetiben'ny Veracruz, ny mariachis, ny posadas ... hahafantatra ny fomban-drazana ara-kolotsaina Meksikana rehetra!
Inona no fitafian'ny Maya
Ny Mayans dia iray amin'ireo olona manan-danja indrindra sy mahaliana amin'ny tontolo taloha. Nozaraina nanerana an'i Amerika Afovoany, nandritra ny an'arivony taona maro. Efa mba nanontany tena ve ianao hoe nanao ahoana ny fitafian'ny Maya taloha? Nanao zipo, kapa, akanjo lava, lobaka miloko ary volom-borona maro izy ireo.
Ny angano kanadiana dia entanin'ny substrate Guanche manankarena, fa miresaka nosy nipoitra sy nanjavona toa ny majika koa izy ireo.
Akanjo rosiana nentim-paharazana
Sarafan, poneva, kaftan, dia ny anaran'ny akanjo nentin-drazana Rosiana sasany, lova avy amin'ny harena ara-kolontsain'ity vahoaka eropeana taloha ity
Ny angano meksikana, izay mamaly ny famolavolana ny kolontsaina talohan'ny Columbian sy Eoropeana, dia manana lova ara-poko lehibe
Akanjo nentim-paharazana Japoney
Japon no tranoko faharoa. Efa imbetsaka aho no tao ary tsy andriko ny hiverenan'ny valanaretina. Tiako ity firenena ity, ny mponina ao aminy, ny gastronomy ary ny Kimonos, obis, yukatas, geta kapa? Inona no fantatrao momba ny akanjo nentim-paharazana Japoney?
Ny angano ny famantaranandro any Prague
Ny Prague Astronomical Clock dia sanganasa tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao, holazainay aminao ny angano manodidina ity asa kanto tsy mampino ity. Vakio ny lahatsoratra!
Ny fomba amam-panao hafahafa hafahafa 10 manerantany
Ny zavatra tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana dia ny fahalalana ireo kolontsaina sy fomban-drazana vaovao. Jereo amin'ity lahatsoratra ity ireo fomba amam-panao hafahafa 10 hafahafa indrindra eto an-tany!
Akanjo mahazatra Yukatán
Ny akanjo mahazatra an'i Yukatán dia vokatry ny fiheverana diso eo amin'ireo tompon-tany sy Hispanika. Entina mandritra ny jaranas, ilay dihy nentin-drazana ao amin'ilay faritra
Fomban-drazana sy fomban-drazana any Etazonia
Ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana any Etazonia dia misy fialantsasatra toy ny Thanksgiving na Andron'i St. Patrick.
Anisan'ireo sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Paris ny 'Marie Antoinette', 'Les Miserables' na 'The Hunchback of Notre Damme'.
Ny angano Galicia dia be dia be araka ny hatsaran'izy ireo ary mamaly ny lova am-bava sy angano manan-karena amin'ny tanin'i Breogán
Ny sakafo mahazatra an'ny Veracruz dia manambatra ny tsara indrindra amin'ny substrate teratany miaraka amin'ireo vokatra tonga avy any Espana sy ny fitaomana afrikana.
Ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco dia mifamatotra amin'ny fomban'ny charrería sy mariachi. Noho izany, maneho ny tena izy any Meksika izy io.
Ny angano any Roma dia be dia be ka miresaka ny fananganana ny tanàna sy ny taona voalohany niorenany aza.
Ny dihy mahazatra any amin'ny faritra Karaiba dia misy substrate telo: ny vazimba teratany, ny iray avy any Espana ary ny iray avy any Afrika.
Ny sakafo meksikana dia lova tsy azo tsapain-tanana an'ny zanak'olombelona. Mampiseho anao lovia 7 mahazatra any Mexico izahay fa tsy maintsy andramanao. Vakio ny lahatsoratra!
Ny horonantsary tsara indrindra jerena alohan'ny handehananao any Roma dia manome anao fomba fijery izay tena ilaina amin'ny dianao mankany amin'ny Tanàna Mandrakizay.
Ny angano Seville dia be dia be ary manondro ny taloha angano ny endri-tsoratra izay nonina ny tanàna tsara tarehy Andalusia.
Ny fitsapana Covid notakin'ny firenena dia taratry ny tsy fisian'ny fitoviana. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy nametraka ny fari-pitsipiny sy ny fitakiany.
Ny famakiana momba ireo toerana lavitra eto amin'ny planeta dia fomba tsara hamonoana ny bibikely, aza hadino ny toro-hevitra omenay!
Ny akanjo mahazatra an'i Veracruz dia manambatra ny autochthonous sy izay avy any Espana. Misongadina amin'ny fahamaroan'ny fotsy sy ny lamba tsotra ao aminy.
Lazainay aminao hoe iza avy ireo morontsiraka nudist tsara indrindra ao amin'ny nosy Tenerife ary inona no atolotry ny tontolony aminao.
Miresaka momba ny fiangaliana mahafinaritra ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediteraneana izahay, izay manolotra làlana isan-karazany.
Lazainay aminao ny antsipiriany sasany hianarana ny fomba fandoavana ny tolam-bola any Portugal, antsipiriany iray lehibe raha mandeha any amin'ny firenena Portiogey izahay.
Lazainay aminao ny atao hoe fizahantany ara-panatanjahantena, karazana fizahan-tany izay miroborobo ary azo atao amin'ny toerana maro.
Hiresaka momba ny sasany amin'ireo fomban-drazana mahaliana any Shina isika, firenena iray manana kolontsaina taloha izay manan-javatra betsaka hatolotra.
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao miakanjo amin'ny fitsidihana mahazatra any Maroc, mahafantatra bebe kokoa momba ny akanjon'izy ireo mahazatra.
Lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny akanjo mahazatra sy nentim-paharazana any India hahafantarana bebe kokoa ny kolontsainy.
Lazainay aminao hoe inona avy ireo karazana fizahan-tany any Espana mba hahafantaranao izay mety ho anao.
Ny fetibe Cordoba patios dia fifaninanana voninkazo mahafinaritra izay voaravaka tsara ireo velaran-trano ireo.
Hiresaka momba ny sasany amin'ireo fomban-drazana tsara indrindra any Irlandy izahay hahafantarana bebe kokoa ity toerana tsy mampino ity.
Miresaka momba ireo toerana fizahan-tany lehibe any Amerika atsimo izahay, miaraka amin'ireo faritra lehibe azo tsidihina.
Miresaka momba ny morontsiraka sasany tsara indrindra any amin'ny nosy Azores izahay, izay miavaka amin'ny hatsaran-tarehiny.
Hiresaka momba ireo nosy tsara tarehy indrindra any Gresy isika, toerana mahaliana ny fizahan-tany be mpitia.
Miresaka momba ny lasy dimy tsara indrindra any Catalonia izahay, trano honenana ho an'ny fialan-tsasatra manaraka.
Lazainay aminao izay azo jerena amin'ny morontsiraka tsara Oyambre any Cantabria sy amin'ireo faritra akaiky azy.
Lazainay aminao ny zavatra azo jerena ao amin'ny faritry Cimadevilla malaza ao Gijón, ny tanàna akaiky azy indrindra.
Manome anao torohevitra izahay ny amin'izay ho hita ao Cala Llombard, any amin'ny nosy Mallorca, ary koa ireo toerana akaiky.
Miresaka momba an'i Faedo de Ciñera izahay, ala beech tsara tarehy any León izay manana sary mahafinaritra.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny Leon fjords, faritra tena tsara ao Castilla y León.
Lazainay aminao ny zavatra azo jerena sy atao ao amin'ny Valan-javaboahary Dunas de Liencres ao amin'ny fiarahamonina Cantabria.
Ny renirano lava indrindra eto an-tany
Inoana hatrany fa ny reniranon'i Neily angano no lava indrindra eto an-tany, fa ahoana kosa raha tsy ...
Tany efitra Sahara
Lazainay aminao ny zavatra azo jerena ao amin'ny faritra Efitr'i Sahara, toerana misy ala mahaliana sy kolontsaina mahaliana.
Morontsiraka mahafinaritra any Huelva
Hiresaka momba izay morontsiraka mahafinaritra indrindra ao Huelva isika, faritra feno fasika izay manintona mpizahatany isan-karazany.
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Tempolin'i Luxor malaza any Egypte, tempolin'i Tèbes taloha.
Raha te hahalala izay ho hitanao ao Sanlucar de Barrameda ianao dia ampidiro ity lahatsoratra ity mba hahitanao ny tsiambaratelo nafenin'ity firavaka an'i Cádiz ity.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay hita ao amin'ny Château de Chambord miorina ao amin'ny Lohasaha Loire any Frantsa.
Tanàna tsara tarehy indrindra any Frantsa
Atorinay anao izay tanàna mahafinaritra indrindra eto Frantsa amin'ny lisitry ny toerana tokony hitsidihinay.
Lazainay aminao izay rehetra hitanao sy ataonao ao amin'ny faritr'i Champs Elysees any Paris.
Tsy maro ny mpandeha no sahy mandeha any Chad. Ny ady sy ny fampihorohoroana dia nahatonga ny fizahan-tany tsy ...
Ny hatsarana sy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'i Cádiz dia mifangaro amin'ny toerana iray: Medina Sidonia, toerana eo anelanelan'ny ...
Lazainay aminao hoe iza no hevi-dehibe mahaliana ny distrikan'i Montmartre bohemian any Paris.
Lazainay aminao ny hevitra mahaliana ao an-tanànan'i Plovdiv, ny faharoa manandanja indrindra ao Bulgaria.
Mba tsy hahadino anao ny antsipirian'ny faritra, dia hatolotro anao amin'ity lahatsoratra ity ny lisitry ny toerana mahaliana indrindra hitsidika an'i Cuzco.
Lazainay aminao hoe iza amin'ireo hevi-dehibe mahaliana ny tanànan'i Ourense any Galilia.
Miresaka momba ny toerana tena ilaina hitsidihana ao an-tanànan'ny Soisa ao Lausanne izahay.
Raha ampitahaina amin'ny rano mafana sy feno olona ao amin'ny Ranomasina Mediteraneana, ny Ranomasina Baltika dia mety ho toy ny hatsiaka, lavitra ary ...
Atorinay anao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Baiona, toerana tsara tarehy iray izay hita ao amin'ny Rías Baixas any Galicia.
Lazainay aminao izay azo jerena ao Santo Domingo, miaraka amin'ireo habaka voajanahariny sy ny faritra mpanjanatany manan-danja.
Ny faribolana Arctic no faritra virijiny lehibe indrindra eto an-tany. Tany mahafinaritra mandritra ny ririnina maharitra mandrakizay, na eo aza ny fiaretana ...
Bari dia tanàna tsara tarehy any atsimon'i Italia izay manome anao lova mahafinaritra be dia be, toetr'andro tsara ary gastronomy tsara indrindra.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Katowice poloney ao amin'ny faritanin'i Silesia.
Lazainay aminao ny zavatra hitanao any amin'ireo nosy Shetland mampino any avaratry Ekosy, paradisa tena izy.
Ny fiaraha-miasa any ambanivohitra dia fomba vaovao hamerenana ny fiainana any amin'ireo tanàna nilaozana. Holazaiko aminao hoe inona izany ary ahoana ny fananganana ny mpiara-miasa any ambanivohitra anao manokana.
Nandritra ny fotoana vitsivitsy, tany Moyen Orient, dia nisy hery mipoitra izay ny hareny lehibe dia avy amin'ny volamenantsika ...
Nisaraka tamin'ny afovoan'i Washington i Georgetown teo aloha ary efa an-taonany no nitoeran'ny diplaomaty sy ...
Madrid dia manana tolotra gastronomika malalaka. Aiza no hisakafoanana ao Madrid? Amin'ity lahatsoratra ity dia mizara trano fisakafoanana 9 atolotra anao eto an-tanàna aho.
Ho hitantsika izay hitantsika fa liana amin'ny tanànan'ny Trieste any Italia, miaraka amin'ny faritra manan-tantara.
Ireo hotely 6 tsara indrindra any Copenhagen tamin'ny 2022. Tadiavo ireo hotely 10 mora indrindra akaikin'ny afovoan-tanàna.
Fuciño do Porco any Galicia
Lazainay bebe kokoa aminao ny momba ilay tontolo mahafinaritra fantatra amin'ny anarana hoe Fuciño do Porco miorina ao amin'ny Lugo mariña any Galicia.
Ranomasina Sargasso, ny ranomasina tsy misy morontsiraka
Marina izany, ny ranomasina Sargasso no hany ranomasina tsy manamorona morontsiraka, ny ranony tsy mandro ...
Any amin'ny distrikan'i Carabanchel no ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Madrid: Islazul. Paradisa miantsena ...
Lazainay aminao ny zavatra azonao jerena sy atao ao amin'ny tanànan'ny Benares any India, izay heverina ho tanàna masina.
Lazainay aminao ny tantaran'ny Wewelsburg Castle any Alemana, toerana manan-tantara.
Lazainay aminao ny antsipiriany tokony ho fantatrao momba ny Katedraly Girona, asa iray izay mampifangaro endrika sy mitantara tantara mahafinaritra.
Hiresaka momba ny Plaza Ben'ny tanànan'i Salamanca izahay, tandindon'ny tanàna ary fitambaran-trano tena tsara tarehy.
Firenena lehibe indrindra eto an-tany
Misy firenena 194 amin'izao tontolo izao eken'ny ONU miaraka amin'ny governemantany ary manana fahaleovan-tena tanteraka, ...
Arguineguín dia manolotra anao amoron-dranomasina mahafinaritra, valan-javaboary voajanahary, toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona sy mahandro Kanadiana mahafinaritra.
Miresaka momba ny valan-javaboary Santa Claus Village, any Failandy, toerana misy an'i Santa Claus izahay.
Lazainay anao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao an-tanànan'i Eguisheim, any amin'ny faritr'i Alsace any Frantsa.
Miaraka amin'ny tantara maherin'ny 5.000 XNUMX taona, ny tanànan'i Sevillian, Carmona dia iray amin'ireo goavana indrindra amin'ny ...
Any amin'ny 56 kilometatra miala an'i Castellón, ny nosy Columbretes dia iray amin'ireo tahirin-dranomasina ao amin'ny Ranomasina Mediteraneana miaraka amin'ny ...
Miresaka momba ny Széchenyi Spa mahafinaritra ao an-tanànan'i Budapest izahay, iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany.
Mampiseho aminao ny sasany amin'ireo tanàna ao Cádiz izahay fa tsy tokony halahelo, feno trano fotsy, lova ary toerana voajanahary.
Inona no ho hitanao ao Huelva
Ny faritanin'i Huelva dia toerana ahafahantsika mankafy fialamboly sy toerana maro hahitana. Fantatra amin'ny ...
Ny fahalavoana dia iray amin'ireo vanim-potoana tsara indrindra amin'ny dia. Malemy kokoa ny mari-pana, mora ny vidiny ...
Ny fitsidihana ireo velaran-tany voajanahary tsy mampino indrindra dia tsara ihany koa ho an'ny fialantsasatra. Amin'ity tranga ity dia miresaka ...
Hiresaka momba ny sakafo matsiro indrindra amin'ny gastronomika Basque izahay, mifantoka amin'ny trondro sy ireo akora ilaina kalitao.
Sina dia iray amin'ireo firenena mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao. Tsy hoe tsy taloha, fa nandritra ...
Rahoviana no mandeha any Thailand
Thailand dia iray amin'ireo toerana itiavan'ny mpitsangatsangana rehefa mikasa ny hanao vakansy Azia atsimo atsinanana. Heverina ho ...
Inona no ho hita any amin'ny Nosy Balearic
Lazainay aminao ny zavatra rehetra hita any amin'ny Nosy Balearic, toerana fitsangantsanganana tena mahafinaritra miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra.
Romania, toerana ilaina
Lazainay aminao ny toerana mahaliana rehetra izay azo jerena ao Romania, miaraka amin'ireo tanàna sy tsangambato samihafa.
Inona no hatao any Stockholm
Stockholm dia iray amin'ireo tanàna manintona sy mahavariana indrindra any Eropa. Miaraka amin'ny toerana manana tombontsoa ao amin'ny nosikely iray ...
Izay ho hita ao Marseille ao anatin'ny iray andro
Lazainay aminao izay rehetra mety sy tokony ho hita ao an-tanànan'i Marseille ao anatin'ny iray andro, amin'ny fitsidihana fohy.
Inona no jerena ao Bern
Lazainay aminao ny zavatra rehetra hitanao sy ataonao ao amin'ny tanàna tsara tarehy Bern any Suisse, miaraka amin'ny tanàna tranainy mahaliana.
Lazainay aminao hoe iza no morontsiraka tsara indrindra any Espana, torapasika fasika mahafinaritra azo tsidihina.
Inona no ho hita any New Mexico
Lazainay anao ny zavatra rehetra azo zahana sy zahana any New Mexico any Etazonia.
Iray amin'ireo tandindon'ny Costa Blanca dia i Peñón de Ifach, mpanao vatolampy goavambe ...
Ny moron-dranomasina Poo, ao Asturias, dia miorina ao anatin'ny tontolo voaaro amin'ny morontsiraka atsinanana, kilometatra vitsy ...
Lazainay aminao izay azo jerena ao an-tanànan'i Gengenbah any Alemana, vatosoa tena vanim-potoana fahagola.
Miresaka momba ny tanàna sasany tsara indrindra eto Toledo izahay mba hotsidihina mandritra io fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro io.
Inona no ho hitanao ao amin'ny Ghent
Lazainay aminao ny zavatra rehetra azo jerena sy atao ao an-tanànan'i Ghent any Belzika, tanàna feno tantara.
Inona no ho hita ao Bilbao
Lazainay aminao izay rehetra azo jerena sy atao ao an-tanànan'ny Bilbao, avaratry Espana.
Ny morontsiraka tsara indrindra ho an'ny snorkeling
Raha liana amin'ny ranomasina ianao dia azo antoka fa hanaiky fa vitsy ny fahatsapana mitovy amin'ny an'ny ...
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny tanàn-dehibe manan-tantara ao León ao amin'ny fiarahamonina Castilla y León.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'ny Combarro, miorina amin'ny faritr'i Galisiana Rías Baixas.
Ny faritanin'i Malaga dia fantatry ny Costa del Sol, noho ny torapasika sy ny tontolony. Fa bebe kokoa…
Lazainay anao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny El Puerto de Santa María any amin'ny faritanin'i Cádiz.
Inona no ho hita any Cascais, Portugal
Jereo izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Cascais, Portiogey, kilometatra vitsivitsy miala an'i Lisbonne.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay hita any Latvia, firenena manana morontsiraka, faritra voajanahary ary tanàna mahafinaritra.
Inona no ho hita ao Bergamo
Lazainay aminao izay rehetra azo jerena ao amin'ny tanànan'ny Bergamo italiana, any amin'ny faritr'i Lombardy.
Coves an'i Mallorca
Atorinay anao ny lava-piringa tsara indrindra any Mallorca, paradisa kely hankafizanao ny fialan-tsasatrao.
Inona no ho hita any Florida
Iray amin'ireo fanjakana mandrafitra an'i Etazonia i Florida. Izy io dia fanjakana iray onenan'olona maro sy ny jeografia ...
Any amin'ny faritanin'i Brugoszia, eo amin'ny lohasahan'ny ony Arlanza, iray amin'ireo faritra divay tena manan-danja amin'ny ...
Fizahan-tany ambanivohitra any Espana
Manome anao hevitra maromaro momba ny toerana ahafahanao mankafy fizahantany ambanivohitra any Espana izahay.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Betanzos, Galisiana, ao amin'ny faritanin'i A Coruña.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra azo zahana sy tsidihina ao amin'ny tanànan'ny Cagliari any Italia.
Tallinn, renivohitr'i Estonia
Ny zavatra jerena ao an-tanànan'i Tallinn, renivohitr'i Estonia, miaraka amin'ny tanànany taloha tsara tarehy, World Heritage Site.
La Palma, Nosy Canary
Jereo hoe inona no ho hitanao sy hatao ao amin'ny La Palma any amin'ny nosy Canary.
Inona no ho hita any Avilés, Asturias
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Avilés, Asturian, tanàna iray izay misy tanàna antitra tsara sy gastronomika mahafinaritra.
Ho an'ny olona maro, ny fitsangatsanganana any Japon dia nofinofy mandritra ny androm-piainana satria ity firenena Far Atsinanana ity dia manana ...
Inona no hatao any Fuerteventura
Lazainay aminao ny zavatra rehetra azo atao sy hita eto amin'ny nosy Fuerteventura any amin'ireo nosy Canary fanta-daza.
Inona no ho hita any Marseille
Lazainay aminao ny momba ny toerana mahaliana ao amin'ny tanànan'ny frantsay any Marseille, tanàna seranana tsara tarehy izay any atsimon'ny firenena.
Lazainay aminao hoe iza no toerana tena mahaliana any Suisse, firenena manana zaridaina voajanahary sy tanàna misy ivon-toerana manan-tantara.
Lazainay aminao hoe iza no toerana tena mahaliana an'i Kroasia, toerana manolotra habaka voajanahary sy tanàna taloha.
Asehonay anao ny zava-drehetra hita ao amin'ny tanànan'i Colmar ao Colmar, tanàna misy tanàna antitra tsara tarehy ao amin'ny faritra Alsace.
Raha misy fitenenana milaza hoe, izay alehanao dia ataovy izay hitanao, azonay atao koa ve ny milaza hoe any amin'izay alehanao no mihinana ...
Mampiseho aminao izahay hoe inona avy ireo lovia mahazatra an'ny gastronomien Austrian, lovia izay tokony hozahanao.
Fialan-tsasatra ambanivohitra any Asturias
Jereo ny tanàna tsara indrindra any Asturias hankafizanao fitsangatsanganana any ambanivohitra mahaliana.
Atorinay anao izay hevi-dehibe mahaliana ao amin'ny nosy Sardinia any Italia, miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra sy tanàna mahaliana.
Ny areti-mandringana nateraky ny Covid-19 dia nisy fiantraikany manokana tamin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ny fanidiana ny sisintany, ny fanafoanana ny ...
Ny faritra tsara hohanina any Huesca dia ny manodidina an'i San Lorenzo sy Coso Alto, izay mandrafitra ilay antsoina hoe El Tubo.
Inona no ho hita any Slovenia
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao Slovenia, feno tanàna manan-tantara ary toerana voajanahary be hatsaran-tarehy.
Lazainay aminao hoe iza amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Huelva ary inona ny toetra mampiavaka azy ireo hahafahanao manao lisitra raha io no halehanao.
Inona no hita ao amin'ny reniranon'i Sella
Lazainay aminao ny zavatra rehetra azo jerena akaikin'ny moron'ny reniranon'i Sella any Asturias, iray amin'ireo renirano manandanja indrindra.
Atorinay anao ny sasany amin'ireo tanàna tsara indrindra eto Seville hitsidika, miaraka amin'ireo tanàna izay manome lova sy habaka voajanahary.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny Nosy Museum malaza eo afovoan'i Berlin, nosy manana tranombakoka manan-danja tokoa.
Zavatra tokony hatao any Rothenburg
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny tanànan'ny Alemanina ao Rothenburg, tanàna misy tanàna antitra antitra iray.
Valan-javaboary ao Catalonia
Lazainay aminao hoe iza ny valan-javaboary tsara indrindra any Catalonia, be pitsiny lehibe misy manintona sy toerana malalaka.
Jereo izay azo jerena ao amin'ny tanànan'ny Los Caños de Meca any amin'ny faritanin'i Cádiz, amoron-tsiraka.
Jereo izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Ponta Delgada, any Azores, miaraka amin'ny kanto amoron-dàlana, tranobe tsara tarehy ary zaran-tany.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fitsidihana ny Katedraly Murcia, tranobe ara-pivavahana manandanja indrindra.
Piazza Navona any Roma
Lazainay anao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao Piazza Navona, iray amin'ireo kianja lehibe ao an-tanànan'i Roma.
Fatima any Portugal
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'ny Fatima any Portugal, toerana iray ahafahanao mahita toeram-pivavahana sy toerana voajanahary.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny tanànan'ny San Sebastián tsara tarehy, toerana misy gastronomie tsara sy lafika tsara kokoa.
Lazainay aminao ny zavatra azo jerena ao amin'ny tanàna kelin'i Masca any Tenerife, toerana misy dian-tongotra tsara tarehy.
Roque Nublo any Gran Canaria
Lazainay aminao ny zavatra azo zahana raha mitsidika ny Roque Nublo, fananganana vatolampy eo afovoan'ny nosy Gran Canaria isika.
Lazainay aminao izay rehetra azo jerena sy atao ao an-tanànan'i Aqaba any Jordania, ilay hany tokana manana fidirana amin'ny ranomasina.
Ny gastronomy japoney dia iray amin'ireo tiako indrindra. Tsy dia zavatra firy no tiako ary amporisihako ny rehetra ...
Ny sakafo nentim-paharazana any Espana dia malalaka, miovaova ary tena matsiro. Izy io dia mazàna amin'ny fandraisana anjara avy amin'ny samihafa ...
Atorinay anao izay rehetra azo jerena ao an-tanànan'i Puerto de la Cruz ao amin'ny nosy Tenerife.
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay hitsidihana ny Alhambra ao an-tanànan'i Granada, miaraka amin'ny toerana be mpijery.
Inona no jerena ao Mycenae
Lazainay aminao ny zavatra rehetra hitanay ao amin'ny toerana arkeolojika Mycenae any Gresy, miaraka amin'ny tranombakoka arkeolojika.
Mihinana any Lisbonne
Lazainay aminao hoe aiza no hihinananao any Lisbonne ary koa inona no lovia tsara indrindra momba ny gastronomy Portiogey izay tsy maintsy manandrana anao.
Inona no ho hita ao amin'ny Conil de la Frontera
Hasehonay anao izay rehetra azo jerena sy atao ao amin'ny tanànan'i Conal de la Frontera any Andalusia izay any amin'ny faritanin'i Cádiz.
Haneho aminao izay tsara indrindra any Portugal izahay, firenena feno zorony mahaliana.
Amin'izao fotoanan'ny areti-mandringana izao dia tadidintsika ny isan'ny olona mipetraka eto ambonin'ny planeta eto amintsika. Tsy toy izao foana, ...
Lazainay aminao hoe iza ny renivohitra tsara indrindra any Eropa, toerana vitsivitsy izay tsy maintsy tsidihinay.
Inona no ho hita eny amin'ny morontsiraka Italiana
Miresaka zavatra mahaliana vitsivitsy izay hita eny amin'ny morontsiraka Italiana izahay, faritra midadasika be miaraka amin'ny sary mahaliana.
Morontsiraka paradisa an'izao tontolo izao
Hahafantatra ireo morontsiraka paradisaacal an'izao tontolo izao isika, miaraka amina morontsiraka fasika tsara indrindra hitsidika ny planetantsika.
Inona no ho hita any Calpe, Alicante
Lazainay aminao izay azo jerena ao an-tanànan'i Calpe, any Alicante, toerana tena mpizaha tany izay misy tavela amin'ny arkeolojika.
Lazainay anao ny zavatra rehetra azo jerena sy ny fomba hahatongavana amin'ny riandrano Ézaro fantatry ny renirano Xallas any Galicia.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra hitanao sy ataonao ao an-tanànan'i Archena any Murcia, izay misy làlana fitsangantsanganana sy tranombakoka.
Lazainay aminao izay rehetra hitanao sy ataonao ao amin'ny nosy kely Burano, akaikin'ny tanànan'i Venise any Italia.
Zavatra tokony hatao ao Hallstatt
Lazainay aminao ny zavatra rehetra hitanao sy ataonao ao amin'ny tanàna kely Hallstatt, akaikin'ny farihy iray any Austria.
Ny Museum Museum dia iray amin'ireo galeriana manan-danja indrindra manerantany ary malaza indrindra any Madrid. Izy izay dia…
Inona no ho hita any Toledo
Lazainay aminao izay azo jerena ao an-tanànan'i Toledo, tanàna iray taloha izay ahitanao ny karazana lova sy tranobe rehetra toa ny Alcázar.
Lazainay aminao ny zavatra azo jerena ao amin'ny valan-javaboary tsara tarehy Torres del Paine any Shily, misy farihy glacial, tendrombohitra ary glacier.
Tena akaiky an'i Barcelona, ​​ny tanànan'ny Caldes de Montbui dia fantatra amin'ny rano mafana. Fa manome anao ihany koa tsangambato sy gastronomie manan-karena.
Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Playa Blanca any Lanzarote, toerana tena fizahan-tany eo akaikin'ny toerana mahaliana.
Ben'ny tanàna Bárcena
Bárcena Ben'ny tanàna dia tanàna kely any ambanivohitra Cantabria izay toa miorim-paka amin'ny fotoana. Manolotra anao ny làlana an-tendrombohitra, ny filaminana ary ny gastronomia manankarena.
Miresaka momba ny torapasika tsara indrindra any amin'ny faritry Cabo de Gata any Almería izahay, miaraka amin'ireo faritra feno fasika mahafinaritra hankafizanao ny fahavaratra.
Tanànan'ny Granada, eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra
Ny tanànan'i Granada dia tsy dia fantatra loatra noho ny renivohi-paritany. Saingy, raha mitsidika azy ireo ianao dia hahafantatra toerana mahafinaritra.
Lazainay aminao ny zavatra azonao jerena sy atao ao amin'ny Farihin'i Sanabria, fitsidihana mahafinaritra hankafizanao ny farihy glacial lehibe indrindra amin'ny Peninsula.
Asehonay anao ny zavatra rehetra hitanao amin'ny fitsidihana ny tanànan'i Wroclaw any Polonina, miaraka amin'ireo tranobe taloha, kianja ary katedraly.
Sahan'ny lavenona Brihuega
Nandritra ny fotoana lava be, ny saha lavender any Provence dia toerana fitsangantsanganana tena lehibe ho an'ny mpitia ...
Pyrenees Aragon, fahagagana voajanahary ary tantara maro
Ny Pyrenees Aragonese dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra any Espana. Manolotra anao zava-mahatalanjona voajanahary, tanàna mahafinaritra ary nahandro matsiro.
Lazainay aminao ny zavatra azonao jerena sy ataonao eny amoron-dranomasina Bolonia, faritra fasika tena malaza izay miorina amin'ny faritra voajanahary ao Cádiz.